Golaha Cusub ee Deegaanka Boorame Oo Doortay Maayar Iyo Ku-xigeenkiisa | Somaliland.Org
Golaha Cusub ee Deegaanka Boorame Oo Doortay Maayar Iyo Ku-xigeenkiisa
December 19, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Golaha Deegaanka la doortay ee Magaalada Boorame oo maanta yeeshay fadhigoodii ugu horeeyey ee rasmi ah ayaa waxay cod aqlabiyad ah ku doorteen Mayarka Cusub magaaladaasi Mudane Saleebaan Xasan Xaddi.
Sidoo kale,waxay isla maanta u doorteen Md Maxamed maxamud Faarax (Dheereyste) inuu noqdo Maayar ku xigeenka magaaladda Boorame. Fadhigan oo ay goob joog ka ahaayeen saraakiil ka socday wasaaradda daakhiliga Somaliland iyo Maayarkii hore Md. C/Raxmaan Shide Bille.
fadhiga maanta oo ay goobjoog ka ahaayeen guud ahaan 21-ka xubnood ee uu ka kooban yahay golaha deegaanka ee Boorame ayaa waxay xildhibaanadu cod uga qaadeen doorashada mayarka iyo ku xigeenkiisa, waxaana jagada Maayarka ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Md. Saleebaan Xasan Xaddi iyo Md. Cabdi Cismaan Dhegoweyne.
shan iyo toban mudane oo ka mid ah golaha deegaanka ayaa doortay Md Saleebaan Xasan Xaddi, halka shan mudane-na ay codkooda siiyeen Md cabdi Cismaan dhegoweyne, gudoomiyahii fadhigaasina ma codayn sidaana waxa jagada mayor-ka Boorame ku soo baxay Xildhibaan saleebaan Xasan xaddi.
jagada Ku xigeenka Maayarka oo uu isu soo sharaxay hal xildhibaan oo keliya oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Faarax (Dheereeye) ayaa waxaa ogolaaday sagaal iyo toban mudane, waxaa ka aamusy hal xildhibaan, gudoomiyahuna ma codayn. sidaasna waxaa jagadii ku xigeenka mayor-ka Boorame ugu guulaystay Md Maxamed maxamuud Faarax (Dheereyste).
Kulankaasi oo musharixii lagaga adkaaday kursiga maayarku Boorame uu si weyn ugu hambalyeeyey mayor-ka Cusub ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirrada wasaaradaha Shaqada iyo arrimaha Bulshada Md maxamed Axmed Barre (Garaad) iyo Md Cabdirisaaq Cali Cismaan. halka sidoo kalena ay goobjoog ka ahayeen dadweyne faro badan oo magaaladaasi degan. Cumar Maxamed Faarax
Previous PostADO iyo DF oo si wadajira u soo kormeeray mashiicdii ay Ado ka fulisay deegaanada OodweyneNext PostKomishanka Oo Tafaasiil Kaga bixiyay Doorashadii iyo Cabashooyinka Ka soo baxayba	Blog